एक पूर्णतावादी व्यक्ति - कसरी थाहा छ यदि तपाइँ साँच्चै हुनुहुन्छ | बेजिया
कसरी थाहा छ यदि तपाइँ एक पूर्णतावादी हुनुहुन्छ
सुसाना Godoy | 05/09/2021 18:00 | मनोविज्ञान
पूर्णता को अस्तित्व मा छैन, भले ही हामी सबै माध्यम बाट यो खोज्न को लागी। तर त्यहाँ एक पूर्णतावादी व्यक्ति हो र यो एक राम्रो वा नराम्रो कुरा हुन सक्छ। किनकि जसरी हामी राम्ररी जान्दछौं, हामी एक निश्चित चरम मा लिने सबै नकारात्मक र हानिकारक हुनेछ। यही कारणले गर्दा आज हामी सबै कदमहरु प्रकट गर्दछौं कि तपाइँ पत्ता लगाउन को लागी कि तपाइँ हुनुहुन्छ वा छैन।
जब हामी एक पूर्णतावादी व्यक्तिको बारेमा कुरा गर्छौं, यो सत्य हो कि हामी बिभिन्न केसहरु बीच हुन सक्छौं। किनभने यदि यो केहि हो कि तपाइँ लाई तपाइँ लाई गुणहरु लाई अझ राम्रो संग विकास गर्न को लागी अनुमति दिन्छ र तपाइँ बढ्छ, तब यो बिल्कुल सकारात्मक हुनेछ। तर यो सधैं मामला होईन, त्यसैले हामी त्यो नकारात्मक भाग को लागी धेरै पूर्णतावाद हामीलाई नेतृत्व गर्न को लागी कुरा गर्नु पर्छ।
1 यो एक पूर्णतावादी व्यक्ति हुनुको मतलब के हो?
2 कुनै पनि गल्ती असफलता हो
3 वा कालो वा सेतो
4 उनीहरु सल्लाह सुन्दैनन्
5 उनीहरुलाई निर्णय लिन गाह्रो हुनेछ
यो एक पूर्णतावादी व्यक्ति हुनुको मतलब के हो?
हामी भन्न सक्छौं कि एक पूर्णतावादी हुनु एक लक्षण हो कि सबै मानिसहरु संग हुन सक्छ। धेरै अन्य जस्तै एक विशेषता हो कि हाम्रो व्यक्तित्व को हिस्सा हुनेछ। यो एक व्यक्ति को बारे मा भनिएको छ कि ऊ उद्देश्य को एक श्रृंखला प्राप्त गर्न चाहन्छ तर असफल बिना, वा गल्तीहरु को लागी किनभने उनीहरु को लागी यो एक सानो गल्ती गर्न को लागी एक असफलता हुनेछ। तेसैले, तपाइँको चिन्ताको स्तर बढ्नेछ, सहिष्णुता घट्नेछ र तपाइँको जीवन एक निरंतर तनाव हुनेछ, लक्ष्यहरु लाई प्राप्त गर्न को लागी जुन सम्भव छैन को रूप मा तपाइँ धेरै अवसरहरुमा कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ। निस्सन्देह, यो सबै सधैं सबैभन्दा नकारात्मक भाग लिईन्छ। किनकि हामीले संकेत गरेका छौं, यदि तपाइँ लक्ष्य, सीमा र उत्साह र पूर्णता संग उनीहरु मा काम गर्नुहुन्छ, तब तपाइँ सबैभन्दा राम्रो संस्करण पाउनुहुनेछ।
कुनै पनि गल्ती असफलता हो
यो एक विशेषताहरु छ कि perfectionists छ। जसरी हामीले राम्रोसँग टिप्पणी गरेका छौं, उनीहरु सफा काम गर्न चाहन्छन्। यो जस्तै यो सबैभन्दा सकारात्मक हुन सक्छ, तर सबै काम र मा हुन सक्छ सबै जीवन मा त्यहाँ सँधै त्रुटि वा असफलता र गल्ती को लागी एक मार्जिन हुनु पर्छ किनकि यसले हामीलाई सिक्न सक्छ। पूर्णतावादी व्यक्तिले यसलाई त्यस्तो देख्दैन। डबल यो भाग मा पतन बाट बच्न को लागी आवश्यक छ किनकि उनीहरु को लागी यो एक असफलता हुनेछ र अपराध को भावना उनीहरु संग हुनेछ।
वा कालो वा सेतो
पूर्णतावादी व्यक्तिको अर्को विशेषता यो हो कि उनीहरु ग्रे को लागी कोठा छोड्दैनन्। त्यो हो, सेतो आधारभूत रंग बराबर उत्कृष्टता को एक हो र हामी भन्न सक्छौं कि यो एक भाग को प्रतिनिधित्व गर्दछ। जबकि रंग कालो अर्को भाग को प्रतिनिधित्व गर्दछ, तर एक बाट अर्को प्राप्त गर्न को लागी, त्यहाँ रंगहरु को एक किसिम मा एक बाटो हुनु पर्छ। अन्य शब्दहरुमा, त्यहाँ सधैं एक मध्यम मैदान छ, पूर्णतावादीहरु को लागी कम।। उनीहरु चरम सीमाहरु हुन्, कुनै अपवाद बिना। जसले हामीलाई उल्लेख गर्न को लागी नेतृत्व गर्दछ कि उनीहरु आत्म-आलोचनात्मक व्यक्ति हुन् र यदि उनीहरु बाटोमा खसे भने यो उनीहरुका लागी शर्मको कुरा हुनेछ।
उनीहरु सल्लाह सुन्दैनन्
एक सामान्य नियम को रूप मा, यो फरक पर्दैन कि तपाइँ उनीहरुलाई के भन्नुहुन्छ, किनकि उनीहरु अरुको सल्लाह सुन्दैनन्। उनीहरुका आफ्नै लक्ष्यहरु छन् र यदि तपाइँ उनीहरुलाई राम्रो राय दिन चाहानुहुन्छ उनीहरु उनीहरुलाई लिने छैनन्। चूंकि उनीहरु आफैंमा कडा छन् वा उनीहरु वरपरकाहरु भन्दा राम्रो मान्छन्। त्यसैले हामी त्यो थप्न सक्छौं उनीहरु पनि असहिष्णु छन्, किनकि यदि उनीहरु आफैं संग छन्, अझ धेरै उनीहरु वरपरका मानिसहरु संग। उनीहरुसंग एक प्रकारको विचार छ र यदि उनीहरु फिट छैनन् वा उनीहरु जस्तै छन्, तब उनीहरु अरु केहि जान्न चाहँदैनन्। यसैले यो तथ्य आउँछ कि उनीहरु अन्य मानिसहरु लाई डेलिगेट गर्दैनन्, किनकि उनीहरु विश्वास गर्छन् कि उनीहरु उनीहरु जस्तै गर्दैनन्।
उनीहरुलाई निर्णय लिन गाह्रो हुनेछ
जे होस् उनीहरु आफैं को बारे मा यकीन छ र उनीहरु के सोच्छन्, यस मामला मा उनीहरु यति पक्का हुनेछैनन्, तर त्यहाँ एक कारण छ। यो होईन किनकि उनीहरु के चाहन्छन् भन्ने बारे मा स्पष्ट छैनन्, तर किनभने उनीहरु त्यो असफलता बाट साँच्चै डराउँछन्। तेसैले जब उनीहरु एक निर्णय गर्न को लागी, उनीहरु दुई पटक सोच्नेछन् र कहिलेकाहीँ, पनी यो केहि चिन्ता उत्पन्न हुनेछ। यी सबै लक्षणहरु थाहा पाइसकेपछि, तपाइँ पहिले नै अधिक स्पष्टता के हो कि पूर्णतावादी व्यक्ति जस्तै हो।
लेखको पूर्ण मार्ग: बेजिया » मनोविज्ञान र जोडी » मनोविज्ञान » कसरी थाहा छ यदि तपाइँ एक पूर्णतावादी हुनुहुन्छ
हाई स्कूल केशविन्यास: छिटो र सजिलो